Toeram-pisakafoanana an-tserasera Espaniola - Kaody Bonus Bonus an-tserasera
(255 vato, average: 5.00 avy tany 5)
Loading ... Ny Espaniôla dia iray amin'ireo firenena filokana indrindra eto an-tany, nefa tamin'ny 1812 dia namboarina teto ny loteria voalohany. Tamin'ny 1977, ny governemanta espaniola dia nanapa-kevitra ny amin'ny lalàna mifehy ny filokana. Tamin'ny filokana, izay mifototra amin'ny fahaiza-manao, no ampiharina amin'ny voalohany, ary tamin'ny 1981 dia nanjary ara-dalàna ny milina filokana sy ny fialamboly filokana mitovy amin'izany. Tany am-piandohan'ny taona 80 dia maherin'ny folo ireo mpandraharaha nahazo fahazoan-dàlana hanokatra casino any Espana. Mariho ho an'ireo mpitsidika ny lahatahiry filokana amin'ny Internet fa ankehitriny dia miroborobo ny indostrian'ny filokana Espaniola. Ny firenena dia manana trano filokana maherin'ny 60 sy milina filalaovana eo amin'ny ampahefatry ny tapitrisa.
Tamin'ny taona 2012 dia nanomboka nanova ireo fanovana mpanao lalàna vaovao, ao anatin'izany ny fifehezana ireo mpandraharaha casino an-tserasera, ary koa ny fametrahana sazy amin'ny fikarakarana filokana tsy ara-dalàna. Ny mpandrindra ny indostrian'ny filokana ao amin'ny firenena dia ny Birao foibe misahana ny fandrindrana ny filokana (Dirección General de Ordenación del Juego). Ny tena andraikitry ny Birao dia ny fanomezana fahazoan-dàlana, fanaraha-maso ny fiasan'ny orinasa filokana, ary koa ny fametrahana lamandy raha sanatria misy asa tsy ara-dalàna.
Gambling amin'ny Internet ao Espaina
Nandritra ny fotoana lava, tsy nisy lalàna manokana mifehy ny hetsik'ireo tranonkala filokana an-tserasera any Espana. Na izany aza, nanomboka ny taona 2002, ny governemanta espaniola dia nanomboka niroso tamin'ny làlana fitantanana sy fanarahana ara-dalàna ny tranokalan'ny casino an-tserasera. Izany dia nahatonga ny fananganana ny lalàna mifandraika amin'ny filokana amin'ny Internet any Espana, izay nametraka ny fototra ho an'ireo mpandraharaha fahazoan-dàlana.
Nanjary manan-kery tamin'ny Jona 2012 ny lalàna, ary nanomboka tamin'izay dia mihoatra ny 70 ny mpandraharaha filokana no nahazo alalana. Na izany aza, lalàna henjana sy hetra 25% no nahatonga ny mpandraharaha maro tsy hiditra amin'ny orinasa, na izany aza, mirongatra ny tsena filokana amin'ny Internet eto amin'ny firenena. Hatramin'izao dia norarana ny milina fampiasa an-tserasera any Espana. Saingy nanapa-kevitra ny hanova azy ireo ny mpanao lalàna, ary tamin'ny faran'ny Jolay 2014 dia nahazo ny jiro maitso ny slot an-tserasera.
Lisitry ny Topn'ny Espaniola Online Casino 10
Ny tranokalan'ny aterineto ao amin'ny aterineto dia manaiky mpilalao avy any Espana
Jereo ny lisitry ny tranokala an-tserasera izay manaiky mpilalao avy any Espana, ary manolotra kilalao avo lenta sy azo antoka. Eto ianao dia hahita fialamboly marobe avy amin'ny milina slot ka hatramin'ny lalao kasino mivantana amin'ny mpivarotra rindrambaiko malaza toy ny NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, sy ny maro hafa.
Azonao atao ihany koa ny mamaky ny fanadihadinay momba ny tranonkala kazinina ao amin'ny aterineto, mba hahafantaranao ny fampiroboroboana tsara indrindra amin'ny Internet, bonus sy safidy azo vidiana ho an'ny mpilalao avy ao Spai
Mijanona manaraka amin'ny zotram-pitsangatsanganana CasinoToplists - Espaina masoandro sy ny renivohitra mahafinaritra. Manintona sy mahaliana an'i Madrid ny tantarany, ny maritrano kanto, ny toe-tsaina manery ny fiainana. Ireo mpankafy fientanam-po mamirapiratra adrenaline dia ho tia ny efitrano filalaovana, klioba ary filokana ao amin'ny firenena!
Tantaran'ny tantara sy ny jeografia an'i Espaina;
Casino sy Gambling:
Ny banky any an-tanindrazana dia mahazo alalana sy ara-dalàna ny orinasa filokana;
Ny fahaverezana eo amin'ny casino dia fampiasam-bola tsy mitombina raha mitombo ny fihenan-danja, mihena ny hetra.
Ny casino lehibe indrindra ao amin'ny firenena:
Fananganana ny fasika any Las Vegas - ny taona 2022 no sarotra;
Dimy amin'ireo fahitana an'i Madrid misy adiresy;
Zava-baovao mahaliana momba an'i Espana sy ny mponina ao aminy.
Toerana Espaina sy tantara ara-tantara fohy
Ny fanjakan'i Espana - iray amin'ireo Eropa tsara tarehy indrindra, tia mandray olona ary mafana indrindra.
Ny anarany tononkalo, somary hafahafa ihany, nalazany avy amin'ny fiteny fenisianina, izay nandikana ny "i-punks" ho "Beach hyraxes (bitro)."
Toa nisy biby be dia be talohan'izay. Androany, Espana - firenena misy lehilahy mirehareha sy vehivavy tsara tarehy, izay fatra-pitia fiainana, dihy, zavakanto ary zava-mahaliana fantatry ny tany rehetra.
Ny renivohitr'i Espana, Madrid no tantara reharehany nanomboka tamin'ny taonjato fahafolo. Androany, ity tanàn-dehibe ity dia tranon'ny olona mihoatra ny telo tapitrisa, manintona ny efitrano taloha sy ny lapan'ny mpanjaka miaraka amin'ny arabe feno arabe, fivarotana maro, trano fisakafoanana ary klioba maro.
Casinos sy ny filokana ao Espaina
Espana - firenena tsy mitandrina izaitsizy, inoana fa lalaovina isaky ny saika. Ny Espaniola dia tia loteria, lalao karatra, filokana ary casino mazava ho azy. Ho an'ny 2013 amin'ny lalao dia nandany mihoatra ny 10 miliara euro. Amin'ity tranga ity, ny olom-pirenena antonony ao amin'ny firenena dia mandany fahafinaretana toy izany manodidina ny 480 euro isan-taona, izay avo kokoa noho ny any amin'ny firenena hafa.
Nanjary ara-dalàna ny asa filokana any Espana. Nisy vanim-potoana nanitsakitsahana ny zon'ny mpilalao sy ny tompona filokana ary ankehitriny kosa dia ara-dalàna no anaovana izany. Tamin'ny 2011, dia natao ho amin'ny ara-dalàna araka ny fitsipiky ny EU. Mandritra izany fotoana izany dia misy famerana maromaro, ohatra, ny trano filokana dia mety tsy miasa afa-tsy amin'ireo tanàn-dehibe, kokoa ivelan'ny fetran'ny tanàna. Taonan'ireo mpitsidika - hatramin'ny 18 taona. Ny trano filalaovana dia tsy maintsy misy elanelana mifanalavitra.
lalàna mbola tsy nisy toa azy izay ny fatiantoka dia mitovy amin'ny casino amin'ny fampiasam-bola tsy nahomby dia noraisina tamin'ny taona 2013. Amin'ny faran'ny taona, raha mihoatra ny habetsaky ny fandresena ny fatiantoka, dia mampihena ny fandoavan-ketra izany. Fa amin'ny hetra miditra dia tsy maintsy mandoa vola ilaina ianao.
Mazava ho azy, ny lalao ny fiainana dia mifantoka ao afovoan'ny renivohitra. Mirehareha ara-drariny i Madrid amin'ireo trano filokana telo lehibe indrindra sy tsara indrindra eto amin'ny firenena ary na dia i Eropa aza.
Ny trano filokana antitra sy be pitsiny indrindra ao an-drenivohitra Espaniola - Casino de Madrid. Ny trano misy rihana dimy misy tafo ambony tafo dia miorina eo amin'ny Alcalá Street, 15. Tamin'ny 1836, nisokatra ilay trano ho klioban'ny andriana manan-karena te hiloka mba handany ny fotoanany. Ny trano no santionany tsara indrindra amin'ny Belle Époque, ny atitany dia voatahiry ihany koa amin'ny endriny voalohany: marbra fotsy, gilding, karipetra lafo vidy, lambam-baravarana sy lambam-pandriana.
Ny Casino de Madrid dia namorona efitrano lehibe 12, ampy fitaovana tsara amin'ny filokana rehetra. Ankoatra ny zavatra hafa, ny mpitsidika dia afaka mankafy ny sary hosodoko tany am-boalohany avy amin'ny mpanakanto malaza, sary sokitra ary fahagola. Misy dobo filomanosana sy klioban'ny fanatanjahan-tena, sauna, trano fisakafoanana maromaro ary koa efitrano famakiana. Ny trano fisakafoanana dia tena lafo, nefa mendrika izany. Eto izy tamin'ny 2011, nandalo ny EPT farany - European Poker Tour, izay matetika atao any Monte Carlo. Ny Poker dia malaza be any Espana; mitadiava sy mandray anjara amin'ny fifaninanana poker (lehibe na kely) mandritra ny fijanonany ao amin'ny firenena dia tena tsotra.
Ny casino lehibe indrindra dia raisina ho Espaniola Gran Madrid, 29 kilometatra avaratry ny renivohitra no misy azy. Nisokatra ny trano fisakafoanana tamin'ny 1981, ny velarany dia 8000 metatra toradroa, tsy misy fiatoana mihoatra ny milina slot 200 sy slot isan-karazany.
Ilay trano misy rihana telo, izay misy ity casino ity no iray amin'ireo lehibe indrindra sy tsara indrindra any Eropa, dia esorina tsy tapaka ny dokambarotra sy ny fampisehoana. Ny famolavolana dia novonoina tamin'ny taom-piotazana 50. Amin'ny vanim-potoana ririnina ho an'ny lehilahy kaody akanjo - akanjo sy fatorana. Mahaliana ny mitsidika ny trano fisakafoanana farafahakeliny ampahany amin'ny fitsangatsanganana, tsara tarehy voaravaka rehetra.
Any atsimon'ny afovoan'i Madrid, 35 km fotsiny ivelan'ny tanàna no misy ny Casino malaza hafa - Gran Casino Aranjuez. Misokatra isan'andro izy io, ary tsy vitan'ny filokana isan-karazany fotsiny ny vahiny, fa koa ny fahafinaretana amin'ny lovia matsiro ao amin'ny trano fisakafoanana, miala voly amin'ny disko na miditra amin'ny fampisehoana flamenco hafahafa nasionaly.
Euro Vegas amin'ny 2022
Tsy ny trano filokana eto an-drenivohitra irery no trano filokana fanta-daza isaky ny faritra fialan-tsasatra. Drafitra iray hamitana ny fananganana ilay be pitsiny lehibe indrindra amin'ny Las Vegas Sand, tamin'ny 2022 hovaina ho Euro-Vegas. Ny tetik'asa dia misy kompania fialamboly miisa 12, izay ankoatry ny casino dia hisy efitrano misy milina slot 18, efitrano fihaonambe, efitranon'ny hotely, fivarotana, trano fisakafoanana ary koa teatra.
Rehefa vita ny fananganana ny Las Vegas Sand dia ho trano filokana lehibe indrindra any Eropa, ny entana isan'andro dia natao ho an'ny hipetrahan'ny mpitsidika 36. Mizana tsy manam-paharoa ho an'ny Tontolo taloha!
Espaina eo amin'ny sarintanin'i Eoropa
Museo del Prado. Adiresy: Paseo del Prado. Tranombakoka manan-tantara dia miorina ao amin'ny tranobe manan-tantara, ao anatin'ireo vahiny izay misy hosodoko misy talenta Espaniola, Italiana, Holandey ary Flemish.
Ben'ny tanàna Plaza. Adiresy: Ben'ny tanàna Plaza. Ity faritra Madrid tsara tarehy ity, izay manaitra ny famolavolana maritrano kanto.
Lapan'ny mpanjaka. Adiresy: Calle Bailén. Ny trano mimanda Moor taloha dia lasa fonenana ofisialy ary misokatra ho an'ny fitsidihana. Ny efitrano dia voaravaka sary hoso-doko avy amin'ny fahaizan'ny sary hosodoko.
Museum an'ny Queen Cofii. Adiresy: Calle de Santa Isabel, 52. Ity ivon-javakanto ity dia nanangona ireo sary hosodoko mahafinaritra indrindra tamin'ny taonjato faharoapolo.
Kianja Cibeles. Adiresy: Plaza de la Cibeles. Ny faritra mahafinaritra be dia be dia manintona ny sain'ny loharano tamin'ny taonjato faha-XVIII miaraka amin'ny sarivongan'i Cybele - andriamanibavin'ny fahavokarana.
Zavatra mahaliana momba an'i Espaina sy Espana
Any Espana, mihoatra ny firenena hafa rehetra any Eropa, trano fisotroana, trano fisakafoanana ary kafe. Trapeznichat trano eto dia saika tsy ekena.
Ny lokon'ny sainam-pirenena dia voafantina miaraka amin'ny fanajana ny ady omby: mena - ra, mavo - fasika.
Tany Espana dia nanaiky hanambady / hanambady aorian'ny 30, ary manomboka ny ankizy - aorian'ny 35-40.
Namela ny fanambadian'ny mitovy taovam-pananahana ny firenena.
Amin'ny ankapobeny dia anarana avy amin'ny ray sy reny ny anarana espaniola.
Ny fahavaratra mandritra ny fahavaratra amin'ny orana any Espana dia saika tsy azo tanterahana.
Ao amin'ny saikinosy Iberiana no namorona ny gitara, ny musket, ny mopaha, sigara, mpihaza, Navajo antsy sy goatskin.
Espana - ny toerana nahaterahan'i Chupa Chups, fonosana amin'ny vatomamy malaza dia namorona ny tenany Salvador Dali!
0.1 Gambling amin'ny Internet ao Espaina
0.2 Lisitry ny Topn'ny Espaniola Online Casino 10
2.1 Ny tranokalan'ny aterineto ao amin'ny aterineto dia manaiky mpilalao avy any Espana
3.0.1 Toerana Espaina sy tantara ara-tantara fohy
3.1 Casinos sy ny filokana ao Espaina
3.1.0.4 Euro Vegas amin'ny 2022
3.1.1 Espaina eo amin'ny sarintanin'i Eoropa
3.1.3 Zavatra mahaliana momba an'i Espaina sy Espana
finday casino eurobet